Waxyaabaha badankood la ilaaway ee Kabata Line Başcılar Tram Line | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulWaxyaabihii ugu badnaa ee la ilaaway Khadka Kabtanka Bağcılar
24 / 01 / 2020 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY, taraamka
khadka taraamka ayaa illoobey inta badan alaabooyinka
Sida ku xusan ogeysiisyada ay soo bandhigtay Dawladda Hoose ee Magaaladda Istanbul ee Shaxda Cad, 2019 qof ayaa hilmaamay badeecadohooda metro iyo taraamyada sanadka 4.043. Khadka aadka loo ilaaway waa khadka Kabataş-Bağcılar Tram Line, halka shayga aadka loo ilaawayna yahay bacda. Mid ka mid ah codsiyada ugu caansan ee ay dadka reer Istanbul u codsadeen Dawladda Hoose ee Magaalada Istambul (IMM) Miiska Cad ee sanadka 2019 ayaa ah ogeysiinta hantida luntay. Marka loo eego codsiyada; Sanadka 2019, 4 kun 43 qof ayaa hilmaamay shay ku jirtay gadiidka tareenka sida metro, taraamka iyo gaaska.
Khadata Line-Bağcılar Tram Line wuxuu ku jiraa meesha ugu horeysa…
Marka loo eego macluumaadka laga soo uruuriyay xogta White Table ee Metro Istanbul, khadka ugu khasaaraha badan wuxuu ahaa Khadka Kabataş-Bağcılar Tram Line oo leh 1202 kiis. Tan waxaa ku xigtay Yenikapı-Hacıosman oo leh 724 kiis, garoonka Yenikapı-Atatürk oo leh 601 kiis, metrooyinka metro Yenikapı-Kirazlı oo leh 438 kiis.
3 kun 95 rakaab ah ayaa waayey boorsooyinkoodii ...
Muwaadiniintu waxay sheegeen in ay lumiyeen boorsooyinkoodii ugu badnaa ee codsiyada la xiriira nidaamka tareenka sanadka oo dhan. Waxaa la soo sheegay in 3 kun iyo 95 rakaab ah ay boorsooyinkooda ku waayeen baabuurta iyo saldhigyada. Shayga ugu badan ee la ilaaway ka dib bacda ayaa ahayd shey elektiroonig ah oo leh 643 kiis. Wuxuu ku wargaliyay inuu lumiyey lacag dhan 202 rakaab ah, dahab dahab ah oo rakaab ah, iyo 91 rakaab ah uu lacagtiisa ku waayey saldhigyada iyo gawaarida.
273 shey ayaa la helay oo la siiyay milkiilaha…
Sanadka 2019, 4 43 oo 273 qof oo dalbaday dalabyo hanti lumis ah oo loogu talagalay kooxaha İBB White Table ayaa laga helay shaqada shaqaalaha Metro Istanbul iyo ciidamada amniga waxaana loosiiyay milkiilayaashooda. Rakaabka dhacdooyinka sida luminta iyo xatooyada gaadiidka dadweynaha; Waxay ku sameyn karaan codsiyadooda iyagoo aadaya maareeyaha saldhigga uu shilku ka dhacay ama iyagoo wacaya 153 Line Table Line. Waxyaabaha la ilaaway ee gawaarida waxaa loo diraa xafiiska lumay iyo aasaaskii dhamaadka maalinta. Sida ku xusan codsiyada ka diiwaangashan miiska cad, baaritaan ayaa lagu sameeyaa inta u dhexeysa waxyaabahaan rakaabka waxaa la ogeysiinayaa maalinta ku xigta arjiga. Waxyaabaha aan la soo sheegin 15 maalmood waxaa loo diraa Xafiiska Hanti Dhowrka IETT.
Xafiiska Hanti Dhowrka IETT
Shaxda Cad ee Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul
Xafiiska Iibsiga ee Magaalada Istambul